Messages လေးတှရေဲ့တနျဖိုး – Reader Choice
ခဈြသူတှကွေားမှာဖွဈစေ ” လငျမယားတှကွေားမှာဖွဈစကေိုယျဘယျရောကျနတေယျ.. ဘာလုပျနတေယျဆိုတဲ့..
massage လေးတဈကွောငျးက တဈဦးအပျေါတဈဦးဘယျလောကျ အလေးနကျထားတယျဆိုတာကို သိသာစပေါတယျ ။
တကယျတော့လူတှပွေောနကွေတဲ့ ” ခဈြတယျ ” ဆိုတဲ့စကားဟာ လူတဈဦးနဲ့တဈဦးပိုပွီးနီးစပျစတောကလှဲပွီးရငျဘတျထဲကိုတော့ မထိရောကျစပေါဘူး ။ခဈြတယျ ဆိုတဲ့စကားကို ကွိုကျသလောကျပွောပါစသေူငါ့ အပျေါတကယျခဈြပါလား ” သူ ငါ့ကိုတကယျခဈြတာပါ ”
ဆိုတဲ့ အသိကလှဲပွီး ကိုယျ့အပျေါ ဂရုတစိုကျနဲ့အလေးအနကျထားတဲ့ အပွုမူလိုတော့ ရငျဘတျထဲမှာ မလေးနကျတာတော့အမှနျပါ ။ဂရုစိုကျခွငျး ‘ ကွငျနာယုယခွငျး ‘ နှေးထှေးတဲ့မတ်ေတာတရားစသဖွငျ့ အကွောငျးတရားတှဟော ” အခဈြ ” ဆိုတဲ့ပေါငျးကူးတံတားက စတငျခဲ့တာမှနျပါတယျ ။
ဒါပမေဲ့ တခြို့တှကေ အခဈြဆိုတဲ့ ပေါငျးကူးတံတာကိုတော့ကြျောလှားခဲ့ပါရဲ့ တဖကျကမျးလညျးရောကျရော ရှဆေ့ကျမသှားတော့ဘူး ရပျတနျ့နခေဲ့တယျ ။ကိုယျ့ရဲ့ အဖျောမှနျကို ဘယျလို ဂရုစိုကျပေးရမလညျး !ဘယျလိုထိနျးသိမျးရမလညျး ! သူ့ဖကျက ကိုယျ့အပျေါဘယျလိုနစေခေငျြလညျး တဈခုမှ မလုပျတော့ဘူး သိဖို့လညျး မကွိုးစားကွတော့ဘူး ။
ငါ သူ့အပျေါသစ်စာရှိနတောပဲ ငါ့ အခဈြတှကေို အားလုံးပေးထားတာပဲ ဒီလောကျဆို ပွညျ့စုံပွီလို့ ခံယူထားကွပါတယျ ။ဒါဟာ လုံးဝ လှဲမှားတဲ့အယူဆပဲ ဖွဈပါတယျ ။
လူတဈယောကျကို ကိုယျ့ရဲ့ထာဝရအဖျောမှနျအဖွဈရှေးခယျြထားပွီးသားဆို ဖာသိဖာသာ လုပျရပျမြိုးရှောငျကဉျြပါ ။ကိုယျ့ဖကျက ဘယျလိုအကွောငျးပဲရှိရှိကိုယျ့လကျတှဲဖျောကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောပွပါ . – ကိုယျဘယျလို အခကျခဲဖွဈနတေယျဆိုတာယုံကွညျစှာနဲ့ တိုငျပငျပါ .ကိုယျ့ဖကျက သူ့အပျေါ အခဈြပိုတယျဆိုပွီးအရငျလို နမွေဲအတိုငျး နတေဲ့ အကငျြ့ကိုပွုပွငျပါ .
ကိုယျဘယျရောကျနတေယျဆိုတာကိုလှမျပွီး အသိပေးတဲ့ အကငျြ့လုပျပါ ။မိမိအရငျ တဈကိုယျထဲဘဝကလို နမွေဲအတိုငျးနမေိလို့မရတော့ပါဘူး ။
ကိုယျ့ဘေးက အဖျောမှနျအတှကျ ထညျ့စဉျးစားပေးရပါမယျ ။အရငျးနှီးဆုံးလူဖွဈသှားရငျ ” ခဈြတယျ ” ဆိုတဲ့စကားကိုထပျခါပွောနမေဲ့အစား ဂရုတစိုကျနဲ့ အလေးနကျရှိကွောငျးသာ ပွပါ ။မိမိခဈြသူအပျေါ ဂရုတစိုကျနဲ့အလေးနကျထားရမယျဆိုတာတဈဘဝစာရှေးခယျြထားတဲ့သူတိုငျး အကွှငျးမဲ့ လိုကျနာသငျ့တဲ့ လုပျရပျဖွဈပါတယျ ။
တဈဦးနဲ့တဈဦး အခဈြက စတငျလာပွီး မတ်ေတာတှေ အပွနျအလှနျထားမိလာမယျ ! နှေးထှေးကွငျနာတဲ့ဆကျဆံရေးတှေ တညျဆောကျမယျ ! အပွနျအလှနျနားလညျမှုနဲ့တဈယောကျအပျေါတဈဦးက အလေးနကျထား ဖို့ပဲလိုအပျတော့တာပါ ။အခဈြဆိုတဲ့စကားထကျလေးနကျစတေဲ့ အခွအေနကေိုရယူကွဖို့ပဲ လိုအပျတော့တယျလို့မွငျပါတယျ ။
ဥပမာ – မိမိဘယျလောကျအလုပျရှုပျနပေါစေ messageလေးတဈကွောငျးနဲ့ အသိပေးဖို့ ဝနျမလေးပါနဲ့ ။အမှနျတကယျ အခဈြစဈစဈနဲ့ခဈြကွပွီး တဈယောကျအပျေါတဈယောကျ ဘယျလောကျ သစ်စာရှိပါတယျ ပွောပွောတဈဘဝစာ လကျတှဲဖျောအဖွဈ ရှေးခယျြထားသညျ ဖွဈစေ …တဖကျလူက လေးနကျတဲ့ ဆကျဆံရေးပေးပွီး နားလညျမှုအပွညျ့ရှိပမေဲ့ ကိုယျ့ဖကျက အခဈြအားလုံး ပေးထားတယျ
သူ့အခဈြအားလုံး ငါပိုငျထားတယျ ဆိုတဲ့ စိတျနဲ့ ဖာသိဖာသာနတောမြားရငျ လမျးခှဲရဖို့က ရာခိုငျနှုနျးမြားသှားပါလိမျ့မယျတဖကျက တှေးလာပါလိမျ့မယျ ” ငါ့အပျေါ ခဈြတော့ခဈြတယျ
အလေးအနကျကြ မရှိပါလား ” ဆိုတဲ့အတှေးအဲ့ဒီအခြိနျ အခဈြဆိုတဲ့အရာက ဘာမှအရေးမပါတော့ပါဘူးမှနျပါတယျ ရငျဘတျကိုရငျးထားရငျ ရငျဘတျကသိလာပွီး
ဦးနှောကျနဲ့ ဆုံးဖွတျတတျလာတာ သဘာဝပါ ……ဖွဈရတဲ့ အကွောငျးရငျးက တဖကျကလေးနကျသလောကျတဖကျက အသိမှတျမပွုရငျ ပေါ့လြော့သှားတာ ထုံးစံပါ ။
ဒါကွောငျ့ ဟိုအရငျခတျေတှတေုနျးကလို စာတဈတနျပတေဈတနျ ခတျေမဟုတျတော့တဲ့ ယနခေ့တျေကွီးမှာမိမိခဈြသူ / အိမျထောငျဖကျတှအေပျေါ တနျဖိုးထားမွတျနိုးတယျဆို ……မိမိဘာလုပျနတေယျ ‘ ဘယျရောကျနတေယျသာကွောငျးမာကွောငျးလေးကို ဖုနျးဆကျပွောဖို့
အခွနေမေပေးရငျတောငျ message တဈကွောငျးလေးနဲ့အလေးနကျထားကွောငျး ပွဖို့ ဝနျမလေး ကွပါနဲ့ ။
ကိုယျပို့လိုကျတဲ့ message လေးတဈကွောငျးဟာတဖကျလူအပျေါ ပိုပွီးလေးနကျလာစနေိုငျသလိုဝေးရမဲ့အကွောငျးအရာတှကေိုတောငျ ခဖြေကျြနိုငျပါတယျ ။တဖကျလူရဲ့ မကျြရညျကိုတောငျ message လေးတဈကွောငျးနဲ့သုပျပေးနိုငျစှမျးရှိတယျ ဆိုတာလညျးမမပေ့ါနဲ့ ။
ခဈြသူတိုငျး အလေးနကျတနျဖိုးထားတတျကွပါစေ ။MayNoe
ချစ်သူတွေကြားမှာဖြစ်စေ လင်မယားတွေကြားမှာဖြစ်စေကိုယ်ဘယ်ရောက်နေတယ်.. ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့..
massage လေးတစ်ကြောင်းက တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးဘယ်လောက် အလေးနက်ထားတယ်ဆိုတာကို သိသာစေပါတယ် ။
တကယ်တော့လူတွေပြောနေကြတဲ့ ချစ်တယ် ဆိုတဲ့စကားဟာ လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးပိုပြီးနီးစပ်စေတာကလွဲပြီးရင်ဘတ်ထဲကိုတော့ မထိရောက်စေပါဘူး ။ချစ်တယ် ဆိုတဲ့စကားကို ကြိုက်သလောက်ပြောပါစေသူငါ့ အပေါ်တကယ်ချစ်ပါလား သူ ငါ့ကိုတကယ်ချစ်တာပါ
ဆိုတဲ့ အသိကလွဲပြီး ကိုယ့်အပေါ် ဂရုတစိုက်နဲ့အလေးအနက်ထားတဲ့ အပြုမူလိုတော့ ရင်ဘတ်ထဲမှာ မလေးနက်တာတော့အမှန်ပါ ။ဂရုစိုက်ခြင်း ကြင်နာယုယခြင်း နွေးထွေးတဲ့မေတ္တာတရားစသဖြင့် အကြောင်းတရားတွေဟာ အချစ် ဆိုတဲ့ပေါင်းကူးတံတားက စတင်ခဲ့တာမှန်ပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ တချို့တွေက အချစ်ဆိုတဲ့ ပေါင်းကူးတံတာကိုတော့ကျော်လွှားခဲ့ပါရဲ့ တဖက်ကမ်းလည်းရောက်ရော ရှေ့ဆက်မသွားတော့ဘူး ရပ်တန့်နေခဲ့တယ် ။ကိုယ့်ရဲ့ အဖော်မွန်ကို ဘယ်လို ဂရုစိုက်ပေးရမလည်း !ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလည်း ! သူ့ဖက်က ကိုယ့်အပေါ်ဘယ်လိုနေစေချင်လည်း တစ်ခုမှ မလုပ်တော့ဘူး သိဖို့လည်း မကြိုးစားကြတော့ဘူး ။
ငါ သူ့အပေါ်သစ္စာရှိနေတာပဲ ငါ့ အချစ်တွေကို အားလုံးပေးထားတာပဲ ဒီလောက်ဆို ပြည့်စုံပြီလို့ ခံယူထားကြပါတယ် ။ဒါဟာ လုံးဝ လွဲမှားတဲ့အယူဆပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
လူတစ်ယောက်ကို ကိုယ့်ရဲ့ထာဝရအဖော်မွန်အဖြစ်ရွေးချယ်ထားပြီးသားဆို ဖာသိဖာသာ လုပ်ရပ်မျိုးရှောင်ကျဉ်ပါ ။ကိုယ့်ဖက်က ဘယ်လိုအကြောင်းပဲရှိရှိကိုယ့်လက်တွဲဖော်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြပါ . ကိုယ်ဘယ်လို အခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာယုံကြည်စွာနဲ့ တိုင်ပင်ပါ .ကိုယ့်ဖက်က သူ့အပေါ် အချစ်ပိုတယ်ဆိုပြီးအရင်လို နေမြဲအတိုင်း နေတဲ့ အကျင့်ကိုပြုပြင်ပါ .
ကိုယ်ဘယ်ရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုလှမ်ပြီး အသိပေးတဲ့ အကျင့်လုပ်ပါ ။မိမိအရင် တစ်ကိုယ်ထဲဘဝကလို နေမြဲအတိုင်းနေမိလို့မရတော့ပါဘူး ။
ကိုယ့်ဘေးက အဖော်မွန်အတွက် ထည့်စဉ်းစားပေးရပါမယ် ။အရင်းနှီးဆုံးလူဖြစ်သွားရင် ချစ်တယ် ဆိုတဲ့စကားကိုထပ်ခါပြောနေမဲ့အစား ဂရုတစိုက်နဲ့ အလေးနက်ရှိကြောင်းသာ ပြပါ ။မိမိချစ်သူအပေါ် ဂရုတစိုက်နဲ့အလေးနက်ထားရမယ်ဆိုတာတစ်ဘဝစာရွေးချယ်ထားတဲ့သူတိုင်း အကြွင်းမဲ့ လိုက်နာသင့်တဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ် ။
တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အချစ်က စတင်လာပြီး မေတ္တာတွေ အပြန်အလှန်ထားမိလာမယ် ! နွေးထွေးကြင်နာတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေ တည်ဆောက်မယ် ! အပြန်အလှန်နားလည်မှုနဲ့တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ဦးက အလေးနက်ထား ဖို့ပဲလိုအပ်တော့တာပါ ။အချစ်ဆိုတဲ့စကားထက်လေးနက်စေတဲ့ အခြေအနေကိုရယူကြဖို့ပဲ လိုအပ်တော့တယ်လို့မြင်ပါတယ် ။
ဥပမာ မိမိဘယ်လောက်အလုပ်ရှုပ်နေပါစေ messageလေးတစ်ကြောင်းနဲ့ အသိပေးဖို့ ဝန်မလေးပါနဲ့ ။အမှန်တကယ် အချစ်စစ်စစ်နဲ့ချစ်ကြပြီး တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် ဘယ်လောက် သစ္စာရှိပါတယ် ပြောပြောတစ်ဘဝစာ လက်တွဲဖော်အဖြစ် ရွေးချယ်ထားသည် ဖြစ်စေ တဖက်လူက လေးနက်တဲ့ ဆက်ဆံရေးပေးပြီး နားလည်မှုအပြည့်ရှိပေမဲ့ ကိုယ့်ဖက်က အချစ်အားလုံး ပေးထားတယ်
သူ့အချစ်အားလုံး ငါပိုင်ထားတယ် ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ဖာသိဖာသာနေတာများရင် လမ်းခွဲရဖို့က ရာခိုင်နှုန်းများသွားပါလိမ့်မယ်တဖက်က တွေးလာပါလိမ့်မယ် ငါ့အပေါ် ချစ်တော့ချစ်တယ်
အလေးအနက်ကျ မရှိပါလား ဆိုတဲ့အတွေးအဲ့ဒီအချိန် အချစ်ဆိုတဲ့အရာက ဘာမှအရေးမပါတော့ပါဘူးမှန်ပါတယ် ရင်ဘတ်ကိုရင်းထားရင် ရင်ဘတ်ကသိလာပြီး
ဦးနှောက်နဲ့ ဆုံးဖြတ်တတ်လာတာ သဘာဝပါ ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းက တဖက်ကလေးနက်သလောက်တဖက်က အသိမှတ်မပြုရင် ပေါ့လျော့သွားတာ ထုံးစံပါ ။
ဒါကြောင့် ဟိုအရင်ခေတ်တွေတုန်းကလို စာတစ်တန်ပေတစ်တန် ခေတ်မဟုတ်တော့တဲ့ ယနေ့ခေတ်ကြီးမှာမိမိချစ်သူ / အိမ်ထောင်ဖက်တွေအပေါ် တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးတယ်ဆို မိမိဘာလုပ်နေတယ် ဘယ်ရောက်နေတယ်သာကြောင်းမာကြောင်းလေးကို ဖုန်းဆက်ပြောဖို့
အခြေနေမပေးရင်တောင် message တစ်ကြောင်းလေးနဲ့အလေးနက်ထားကြောင်း ပြဖို့ ဝန်မလေး ကြပါနဲ့ ။
ကိုယ်ပို့လိုက်တဲ့ message လေးတစ်ကြောင်းဟာတဖက်လူအပေါ် ပိုပြီးလေးနက်လာစေနိုင်သလိုဝေးရမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတောင် ချေဖျက်နိုင်ပါတယ် ။တဖက်လူရဲ့ မျက်ရည်ကိုတောင် message လေးတစ်ကြောင်းနဲ့သုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ် ဆိုတာလည်းမမေ့ပါနဲ့ ။
ချစ်သူတိုင်း အလေးနက်တန်ဖိုးထားတတ်ကြပါစေ ။MayNoe
အရှုံးပေးထားပါတယျဆိုတဲ့လူကို ပိုပွီး အနိုငျယူခငျြကွတယျ
မဈဒယျဝိတျတနျး ခနျြပီယံခါးပတျကို ပွနျလညျရယူနိုငျဖို့ အခှငျ့အရေးရှိလာပွီဖွဈတဲ့ အောငျလအနျဆနျ
မြှျောလငျ့ခငျြသေးပမေယျ့ မြှျောလငျ့ရဲတဲ့သတ်တိတှေ တကယျမရှိတော့ဘူး
Previous Article မဈဒယျဝိတျတနျး ခနျြပီယံခါးပတျကို ပွနျလညျရယူနိုငျဖို့ အခှငျ့အရေးရှိလာပွီဖွဈတဲ့ အောငျလအနျဆနျ
Next Article အခြိနျတနျတဲ့အခါ အရာအားလုံးဟာ နသေားတကလြေး ဖွဈသှားလိမျ့မယျတဲ့
မငိုနဲ့ ညီမလေး … မတနျဘူး မကျြရညျတှကေ စြေးကွီးတယျ
လာလမျးအတိုငျး ပွနျ့လှညျ့သှားမယျ့အတူတူ ခဈြတယျဆိုတဲ့စကားကို အသှငျသှငျ မသုံးခဲ့သငျ့ဘူး